Andriamby akony sary amin'ny teknolojia Job Description / Duty Sample sy ny anjara asa – JobDescriptionSample
Home / Andriamby akony sary amin'ny teknolojia Job Description / Duty Sample sy ny anjara asa
superadmin Jona 28, 2016 Uncategorized Leave a comment 12 Views
Miasa akony fitarafana (MRI) sary. Fanaraha-maso ny marary fiarovana sy fampiononana . Mety hanome gadolinium mifanohitra levitra intravenously. Ao amin'ny fomba famerenana ireo mijoro MRI, nanazava ny mety dinidinika amin'ny olona, sy ny toerana marary. Enga anie hiditra ny solosaina tahirin-kevitra toy ny marary lova, fampifanarahana voalaza, faritra biolojika mba ho lasa scanned, sy ny toerana entina.
Job Skills Fepetra
Zavatra tsy ampy tahirin-tsirin'i batana mitondra any amin'ny suffereris tanana, tratra, waistline, na amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Andriamby hanitsy akony fitarafana (MRI) tarika na peripheral fitaovana.
Fitondran-tena projection tafatafa ny olona mba hamantatra contraindications, ohatra ferrous valves fitaovana izay solon pacemakers .
Mamokatra nomaniny ho solon'izay sary dika mitovy amin'ny namindra toerana an'ireo sary avy amin'ny solosaina ny workstation na fitehirizana haino aman-jery.
Manaova sary na raha tsy izany dia ho rakitra ny andriamby akony sary.
Hazavao andriamby akony fitarafana (MRI) fomba ny olona, mpizara izay olona, na ny mpikambana ao amin'ny tokantrano.
Insert intravenously mifanohitra loko, toy ny ohatra mifanohitra gadolinium, amin'ny fametrahana ny fampiharana mifanaraka.
Jereo sary momba ny tsara, fampiasana fakan-tsary sy ny fitaovana fiarovana akony andriamby.
Andriamby akony manao fitarafana (MRI) skanera.
raha tianao, mba hahazoana antoka toerana mety ho vondrona immobilization, ampiarahina ny Toerana marary ao amin'ny batery fiarovana.
Supply earplugs na headsets ny olona mba hampitombo mora foana sy ambany feo izay mampalahelo.
Haka faribolana na mety fitarafana paikady mba hanao sary izay ilaina.
Troubleshoot sarotra olana mifandray amin'ny andriamby akony fitarafana (MRI) mpamaky na peripheral entana, anisan'izany ny famantaranandro na faribolana.
Sy fanisana izay fitondran-tena mba naharitra foana ny tahiry ny fitaovana izay ny fitsaboana.
Manoro hevitra fitsaboana ekipa na mpianatra amin'ny andriamby akony fitarafana (MRI) fomba na fitaovana fomba.
Miasa Optical fomba mba hanenjika andriamby mahery akony fitarafana (MRI) sary, ohatra azo ampiharina atidoha-fitarafana, real-time vatana mihetsika-ampy, na musculoskeletal fifehezan sy ny fijerena fiaramanidina.
Fitakiana fanampiny sedatives na zava-mahadomelina avy amin'ny dokotera ho an'ny olona amin'ny tahotra na claustrophobia.
Diniho fohy rakitsoratra izay avy amin'ny marary ny fitsaboana.
Hamarino andriamby akony fitarafana (MRI) fitaovana mba hanao araka ny tokony sasany miasa sy ny asa lehibe eo amin'ny araka ny fepetra takiana.
Mamorona manamarika ny mamintina fanombanana dingana na vokatra momba ny dokotera manam-pahaizana ara-pitsaboana, na samy hafa na ny tatitra.
Rohy biolojika manampy biolojika fividianana tahony (PAC) entana.
Position ary miaro kely, moveable andriamby akony fitarafana (MRI) mpamaky ao amin'ny vatana anjara ho lasa imaged, toy ny sandry, lohalika, na mandehana.
Plan fivoriana momba ny fanadihadiana ny raharaha na ny mpanjifa izay pitsaboana.
Task Actions Mila
Fahazoanao ny hevitr'izay vakinao-hahazoana hevi-javatra sy ny fehezanteny ahitana andinin-tsoratra ao amin'ny asa-taratasy mifandraika.
Fahaiza-mihaino-Inona olon-kafa hoe manome saina manontolo, maka fotoana mba hahafantatra ny anton-javatra ho vokarina, nanontany fanontaniana toy ny tonga lafatra, ary amin'ny toe-javatra tsy fanotofana izay dratsy.
Namoaka-Mampita an-tsoratra mahomby tsy mba toy ny tsy mety ny fepetra takiana amin'ny tsena.
Niady hevitra Miteny amin'ny hafa ny vaovao milaza amim-pahombiazana.
Mampiasa Math-matematika ny manamboatra olana.
-Siansa sy ny teknolojia teknika Mampiasa fitsipika mba manamboatra olana.
Criticalthinking-Nampiasa lojika ka nikasa ny mamantatra ny soa sy ny fahadisoana ny Alternate safidy, vokatra na ny fomba olana.
Active Learning-fahatakarana ny hevitry ny vaovao fanazavana ho an'ny ho avy sy ny olana ankehitriny-hamaha fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana Paikady-maka sy ny fampiasana educationORtutorial tetikady sy ny dingana fanabeazana mendrika ny olana na rehefa mianatra zavatra vaovao.
Fanaraha-maso-OverseeingPERDiscovering fanatanterahana ny sampan-draharaha, fanampiny olona, na tena mandinika remedial asa na hamorona enhancements.
Social fidirana-Ny hoe mahalala ny othersA valinteny sy mitondra tena mahalala ny antony satria.
Fandresen-dahatra-Mandresy lahatra ny hafa mba hanova ny fahazarana, na ny intellects.
Discussion-Fandraisana ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana variances.
Mampianatra-mampianatra ny hafa hanao zavatra HOWTO.
Company Orientation-Mafy mitady paikady mba hanampiana ny olona.
Famahana olana Complex--Famantarana olana sarotra sy tahirin-kevitra manan-danja famerenana mampihatra safidy sy hamokatra sy mandrefy voafantina.
Research-Fandalinana raharaham-barotra sy ny vokatra fepetra takiana mba hamoronana fomba.
Engineering Design-manana fitaovana na niteraka sy ny teknolojia mba hanampy mpampiasa mitaky.
Tools Selection-mamaritra fitaovana sy ny fitaovana ilaina ny hatsaram-panahy mba hamono ny asa.
Andian-fametrahana fangatahana, milina, tariby, na fitaovana hanome fahafaham-po fepetra takiana.
Soratra Programming-programana ordinatera ho an'ny hafa fampiharana.
Asa Tracking-fandinihana antso, gauges, na samy hafa hita ho antoka ny fitaovana dia manao tsara.
Asa sy ny Control-Mpitantana fomba ny fomba na fitaovana.
Maintenance-famonoana mahazatra fikojakojana ny fitaovana sy ny manapa-kevitra raha.
Fanamboarana-mamaritra izany ao ambadiky ny fahadisoana izay miasa ary manapa-kevitra izay tokony hatao momba izany.
Manamboatra-fanamboarana fitaovana na modely mampiasa ny fitaovana izay irina.
Quality-Control Evaluation-manao fanombanana sy ny fitsapana ny zavatra, vahaolana, na ny asa hanombanana kalitao na miasa.
View sy ny Decisionmaking-jerena tombontsoa sy ny vola lany ny azo ampitahaina ny asa azo atao ny mifidy ny tsara indrindra iray.
Analysis-mamaritra ny fomba tokony hiasa ny fandaharana sy ny fomba fiovana ao an-toerana, asa, ary koa ny olana mety hisy fiantraikany vokatra.
Fomba Analysis-mamaritra ny fomba na ny rafitra famantarana ny fampisehoana, ary koa araka ny nofinofy ny rafitra, mety na ny zavatra ilaina mba hanatanjahana fampisehoana.
Timemanagement-Fehezo ny fotoana hafa, ary ny anankiray ny fotoana ny.
Fitantanana-bola-Famantarana ny fomba vola miditra dia mety ho lany mba manao ny asa vita, sy ny varotra momba ireo fandaniana.
Fitantanana Product Resources-fandinihana sy mahazo ny marina fampiasana ny endri-javatra, fitaovana, sy ny fitaovana ilaina mba hanao miasa manokana.
Fitantanana ny mpiasa Resources-Mamorona, manosika, sady mitondra ry namana satria miasa, famantarana ny olona tsara indrindra ho an'ny asa.
Fepetra fanabeazana Knowledge Fepetra
Affiliate ny Stage (na fanampiny 2-yr diplaoma)
Sekoly maro Courses
Mihoatra ny 1 yr, hatramin'ny 2 taona ary ao anatin'izany ny,
Asa Authority Skills fahaizana
Zava-bitany / Asa – %
fiaretana – %
Olana ho an'ny Hafa – %
Fahafehezan-tena – %
azo itokisana – %
Tsara Lalina – %
manao ny marina – %
zava-baovao – %
poto-fisainana – %
Direct, ary afaka mandray anjara amin'ny ny fanomanana, anana, sy ny fanomanana ny muffins trondro, hanina, legioma, …